खानीखोलामा सञ्चालित युनाइटेड क्रसर उद्योगमा धादिङका सिडिओको छापा, सञ्चालक फरार ! | Diyopost - ओझेलको खबर खानीखोलामा सञ्चालित युनाइटेड क्रसर उद्योगमा धादिङका सिडिओको छापा, सञ्चालक फरार ! | Diyopost - ओझेलको खबर
खानीखोलामा सञ्चालित युनाइटेड क्रसर उद्योगमा धादिङका सिडिओको छापा, सञ्चालक फरार !
दियो पोस्ट शुक्रबार, मंसिर ०६, २०७६ | १९:०२:०९
धादिङ, ६ मंसिर । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ ताल्ती स्थित खानीखोलामा अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन भएको क्रसर जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपाल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङ सहितको टिमले स्थलगत निरिक्षण गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख एसपी (प्रहरी उपरिक्षक) राजकुमार बैदवार सहित चार वटा गाडीमा पुगेको अनुगमन टोलीले अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको क्रसर हेरेर फर्किएका छन् ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले कानुन विपरित युनाइटेड क्रसर उद्योगलाई २०७५ साल कार्तिक २० गते देखि नै सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको थियो । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ ताल्ती स्थित मलेखु खोलामा निर्माणाधिन ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीमा समेत कार्यरत रोल्पा लिवाङ घर भएका डिल्लीराज पोखरेल र स्थानिय राजनीतिक नेतृत्वको आफन्तद्वारा सञ्चालित उक्त क्रसर क्रसर उद्योग विवादास्पद रुपमा सञ्चालनमा छ ।
स्थानियबासीका अनुसार क्रसरले खानी खोलाको बगरमै जेनेरेटर राखेर अवैध रुपमा खोला दोहन गरिरहँदा समेत स्थानिय प्रशासन मौन बसेका थिए । तर, सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले शुक्रबार भने अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन स्थलमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले आफू स्थलगत अनुगमनमा पहिलो पटक उक्त क्षेत्रमा पुगेको बताएको एक प्रत्यक्षदर्शीले दियोपोस्टलाई बताए । प्रहरी सहितको अनुगमन टोली त्यहाँ पुग्दा क्रसर सञ्चालक भने भागेका थिए । सञ्चालक मध्येका डिल्लराज पोखरेल र समिर अधिकारी फरार रहेको बताइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपालले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष टंक थापाका छोरा तुलसी जंग थापालाई सम्पर्क गरेका थिए । थापाले आफू उक्त क्रसरमा नभएको तर काजपत्र भने आफूसँग रहेको भन्दै झूट बोलेपछि ३ दिन भित्र कागजातसहित जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिर हुन थापालाई निर्देशन दिएका छन् । यद्धपी थापाले भने उक्त क्रसरको मालिक डिल्लीराज पोखरेल रहेको र पोखरेल काभ्रेतिर गएको भन्दै समन्वय समितिका अध्यक्ष सामु झूट बोलेको प्रत्यक्षदर्शीले दियोपोस्टलाई बताए ।
क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिने बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष हरी डल्लाकोटी भने अनुगमनमा सहभागी भएका थिएनन् ।
अनुगमनबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफूहरुले अनुगमन गरेको स्विकार गरे ।
‘हो हामी गएर हेरेका हौँ । हामी जाँदा कोही मान्छे रहेनछ । क्रसर हेरेर फोटो पनि खिचेका छौँ । तुल्सी भन्ने मान्छेलाई जेजे डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट पर्सि जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्न भनेका छौँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले दियोपोस्टसँग भने,‘त्यो डकुमेन्टको अवस्था हेरेर हामीले निर्णय गर्छौं ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई के उक्त उद्योगमा मापदण्ड पुगेको थियो ? भन्ने प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने,‘हामी सबैलाई थाहा छ सर मापदण्ड के भनौँ । तपाईंहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ । त्यहाँ खोला रहेछ । त्यो खोलालाई पुरै डाइभर्ट गरेको रहेछ ।’
उक्त क्रसर उद्योगले क्रसर सम्बन्धि कार्याविधि नै मिचको स्थानियको आरोप छ ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरी डल्लाकोटी, नेकपा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको मिलेमतोमा उक्त क्रसर खोलेको स्थानियको आरोप छ ।
साक्षीमा भने वडाध्यक्षकै छोरा तुलसीजंग थापाले हस्ताक्षेर गरेका छन् ।
जिल्ला स्थित घरेलु विकास कार्यालयले २०६६ साल देखि कुनै पनि क्रसर उद्योगको नविकरण गरेको छैन । नयाँ उद्योग दर्ता समेत नभएको अवस्थामा गाउँपालिकाले किन क्रसर खोलेको पाइएपछि छानबीन थालिएको हो ।
क्रसर सञ्चालक मध्येका समिर अधिकारी भने सिडिओ कार्यालयले छापा हान्ने थाहा पाएपछि बेलायतको राजधानी लन्डन फरार भएको एक स्थानियले बताए ।
शुक्रबार, मंसिर ०६, २०७६ | १९:०२:०९